accessiBe: Ataovy azo idirana ny tranokala rehetra voamarina amin'ny alàlan'ny faharanitan-tsaina artifisialy | Martech Zone
accessiBe: Ataovy azo idirana ny tranokala rehetra voamarina amin'ny alàlan'ny faharanitan-tsaina artifisialy
Na dia nisy aza ny fitsipika momba ny fidirana amin'ny tranokala nandritra ny taona maro, dia niadana ny famaliana ny orinasa. Tsy mino aho fa resaka fiaraha-miory na fangorahana eo amin'ny lafiny orinasa… Mino aho fa ny orinasa dia sahirana amin'ny manaraka.
Ohatra, Martech Zone ambany ny laharana noho ny fahafahany miditra. Rehefa nandeha ny fotoana dia niasa aho mba hanatsara ny kaody, ny famolavolana ary ny metadata ilaina… saingy zara raha maharaka ny fanavaozam-baovao sy ny famoahana tsy tapaka ny atiko. Tsy manana fidiram-bola na mpiasa aho mba hitazonana ny zava-drehetra tokony ho vitako… Manao izay fara heriny aho.
Tsy mino aho fa izaho irery no maningana eto… raha ny marina, manaitra ny isa rehefa mandinika ny tranonkala sy ny fandraisany ny fenitry ny fidirana:
Ny famakafakana ireo pejy fandraisana an-tapitrisany ambony amin'ny tranonkala dia manombatombana fa ny 1 isan-jato monja no mahafeno ny fenitra azo idirana be mpampiasa indrindra.
Inona no atao hoe fidirana? Inona avy ireo fenitra?
Torolàlana momba ny fahazoana miditra ao anaty tranonkala (WCAG) farito ny fomba hanamorana ny votoaty nomerika ho azon'ny olona sembana kokoa. Ny fahazoana miditra dia misy fahasembanana marobe:
Visual fahasembanana - misy fahajambana feno na ampahany, fahajambana loko, ary fahaizana manavakavaka ireo singa mifanohitra.
Kilemaina amin'ny auditory - ao anatin'izany ny marenina feno na ampahany.
Sembana ara-batana - ao anatin'izany ny fahaizana mifanerasera amina fitaovana nomerika amin'ny alàlan'ny fitaovana hafa ankoatry ny fitaovana ampiasain'ny mpampiasa mahazatra toy ny klavie na totozy.
Sembana amin'ny kabary - misy ny fahaizana mifanerasera amina media nomerika amin'ny alàlan'ny kabary. Ny olona manana fahasembanana dia mety manana olana ara-pitenenana izay mihantsy ny rafitra maoderina na mety tsy manana fahaizana miteny mihitsy ary mitaky karazana fampifandraisan'ny mpampiasa hafa.
Sembana ara-pahalalana - toe-javatra na fahasimbana manakana ny fizotry ny sain'ny olona iray, ao anatin'izany ny fahatsiarovana, ny fiheverana na ny fahatakarana.
Kilemaina amin'ny fiteny - ahitana olana amin'ny fiteny sy ny fahaizana mamaky teny.
Ireo kilema fianarana - misy ny fahaizana mivezivezy mahomby sy mitazona vaovao.
Sembana ara-neurolojika - misy ny fahaizana mifanerasera amin'ny tranokala nefa tsy misy fiatraikany ratsy amin'ny atiny. Ohatra, ohatra, ny sary izay mitarika ny fahatairana.
Inona avy ireo singa amin'ny haino aman-jery nomerika mampiditra fidirana sy fidirana?
Ny fidirana amin'ny fidirana dia tsy singa iray, fitambaran'ny endriny fampifandraisan'ny mpampiasa eo aloha sy ny fampahalalana naroso:
Rafitra fitantanana atiny - ireo sehatra nampiasaina hampivelarana ny zavatra niainan'ny mpampiasa. Ireo sehatra ireo dia mila mandray ny safidin'ny fidirana.
Content - ny fampahalalana amin'ny pejin-tranonkala na fampiharana Internet, ao anatin'izany ny lahatsoratra, sary ary feo ary koa ny kaody na ny markup izay mamaritra ny rafitra sy ny fampisehoana.
Mpampiasa-Agents - ny interface ampiasaina amin'ny fifandraisana amin'ny atiny. Anisan'izany ny browser, ny rindranasa ary ny mpilalao haino aman-jery.
Teknolojia manampy - mpamaky efijery, kitendry hafa, switch ary rindrambaiko fitiliana izay ampiasain'ny olona manana fahasembanana hifandray amin'ny maso ivoho mpampiasa.
Fitaovana fanombanana - fitaovana fanombanana fidirana an-tranonkala, validator HTML, validator CSS, izay manome valiny amin'ny orinasa momba ny fanatsarana ny fahazoana miditra amin'ny tranokala sy ny haavon'ny fanarahan-dalànao.
AccessiBe: mampiditra AI ho azo idirana
Fahaizana artifisialy (AI) dia manaporofo fa manampy betsaka kokoa amin'ny fomba tsy noeritreretinay… ary iray amin'izany ny fidirana. accessiBe manambatra fampiharana roa izay miaraka manatratra ny fanarahan-dalàna tanteraka:
An interface interface ho an'ny UI sy ny fanitsiana mifandraika amin'ny endrika.
An Powered AI background handefasana sy hikarakarana ireo fitakiana sarotra kokoa - fanatsarana ny mpamaky efijery sy ny fitetezana fitendry.
Ity misy horonantsary topimaso:
tsy misy accessiBe, ny fizotran'ny fanarenana fidirana amin'ny tranonkala dia atao tanana. Mandany herinandro izany ary mitentina amina hetsy ariary. Fa ny tena manadanja indrindra momba ny fanarenana ny tanana dia rehefa vita izany dia simba tsikelikely noho ny fitetezana, CMS, ary mazava ho azy, fanavaozana ny tranokala. Afaka volana vitsivitsy dia ilaina ny tetikasa vaovao.
miaraka accessiBe, mora kokoa ny fizotrany:
Miseho eo amin'ny tranonkalanao avy hatrany ny interface interface.
accessiBeAI dia manomboka manadihady sy mamakafaka ny tranonkalanao.
Mandritra ny 48 ora, ny tranonkalanao dia azo ekena sy mifanaraka amin'ny WCAG 2.1, ADA Lohateny III, Fizarana 508, ary EAA / EN 301549.
Isaky ny 24 ora, ny AI dia manadihady ireo atiny vaovao sy nohavaozina hamboarina.
Ny fangalarana dolara an'arivony imbetsaka isan-taona dia tsy zavatra zakan'ny ankamaroan'ny orinasa. Amin'ny fanaovana ny fahazoana miditra amin'ny tranokala tsy misy ezaka, takatry, ary voatazona hatrany - accessiBe manova ny lalao.
accessiBe dia manolotra a Fonosana fanohanana Litigation tsy andoavam-bola fanampiny, raha toa ka ihantsiana ny fanarahan-dalàna ao amin'ny tranonkalanao. Miaraka amin'ny fijerin'izy ireo manokana, ny fonosana dia misy ny fanaraha-maso arahin'asa, tatitra, saritany azo idirana, antontan-taratasy manohana ny fanarahana, torolàlana, sy maro hafa.
Hamantatra bebe kokoa Midira maimaim-poana
Disclosure: Ny orinasako Highbridge dia AccessiBe mpiara-miasa ary mampiasa rohy fanaraha-maso mpiara-miasa amiko ato amin'ity lahatsoratra ity izahay. Raha mila fanampiana amin'ny fanamboarana sy fametrahana AccessiBe ianao dia afaka manampy izahay.
Tags: acessibeADA Lohateny IIIaifahaizana artifisialyfidirana amin'ny kaontyfahasembanana mihainofidirana amin'ny kognitasembana ara-tsainafidirana amin'ny fitenyfahasembanana amin'ny fitenyfidirana amin'ny neurolojiasembana ara-neurolojiafidirana amin'ny vatanakilema ara-batanaFizarana 508fidirana amin'ny kabaryfahasembanana mitenyfidirana amin'ny masokilema amin'ny fahitanawcagWCAG 2.1fidirana amin'ny tranonkalatorolàlana momba ny fahazoana votoaty tranonkala
Luminar Neo: Fanovana sary vaovao amin'ny alàlan'ny faharanitan-tsaina artifisialy (AI)
Diso ve ianao manao Instagram Marketing? Mifantoha amin'ny Authenticity!